China-US midziyo yekutakura yakakwira kusvika kumadhora zviuru makumi maviri emadhora ekuAmerica, ichaenda kwenguva yakareba sei?
Kutumira masheya kwakakwenenzvera maitiro uye kusimbiswa, neOrient Overseas International ichikwira 3.66%, uye Pacific Shipping yakakwira kupfuura 3%. Sekureva kweReuters, nekuda kwekuenderera kuri kuwedzera kwevatengesi maodhita mwaka wekutenga weUS usati wasvika, kuwedzera kudzvinyirira pasheni yepasi rose,mwero wekutakura wemidziyo kubva kuChina kuenda kuUS wakwira kuenda padanho idzva rinopfuura US $ 20,000 pa40-tsoka bhokisi.
Iko kumhanyisa kupararira kweiyo Delta mutant hutachiona munyika dzinoverengeka kwakakonzera kudzikira muhuwandu hwepasirese huwandu hwekutakura. Dutu rechangobva kuitika munzvimbo dzekumaodzanyemba kwemahombekombe eChina rine zvarinoita. Philip Damas, maneja maneja weDrewry, kambani inoongorora nezvezvikepe, akati, "Hatina kuzviona izvi muindasitiri yekutakura zvinhu kweanopfuura makore makumi matatu. Zvaifungidzirwa kuti zvinogara kusvika muna 2022 Chinese New Year Lunar ”!
Kubva Chivabvu gore rapfuura, iyo Drewry Global Container Index yakwira 382%. Kuenderera mberi kwekuwedzera kwenzvimbo dzekutakura zvinhu mugungwa zvakare zvinoreva kuwedzera kwemibairo yemakambani anotumira. Kudzoreredza kwehupfumi padivi rekudiwa kwepasirese, kusaenzana kwekupinza kunze kwenyika, kuderera kwekushanda kwemidziyo, uye simba rekutakura ngarava, zvakawedzera dambudziko rekushomeka kwemidziyo kwakonzera kuwedzera kwakanyanya kwemitero yemidziyo yemidziyo.
Iko kukanganisa kwekuwedzera kwekutakura
Sekureva kwedata hombe reUnited Nations Chikafu Sangano, iyo index yenyika yezvikafu yave ichikwira kwemwedzi gumi nemiviri yakateedzana. Kufambiswa kwezvigadzirwa zvekurima nesimbi inofanirwa kuitwawo negungwa, uye mitengo yezvinhu zvakagadzirwa iri kuramba ichikwira, chinova chisiri chinhu chakanaka kumakambani mazhinji pasi rose. Uye zviteshi zveAmerica zvine backlog yakakura yekutakura zvinhu.
Nekuda kwenguva yakareba yekudzidzira uye kushomeka kwekuchengeteka mumabasa evachairi vegungwa nekuda kwedenda, kune kushomeka kwakanyanya kwevafambisi vegungwa vatsva, uye huwandu hwevafambisi vegungwa hwepamberi hwakadzikiswa zvakanyanya. Kushomeka kwevafambisi vegungwa kunotadzisa kuburitswa kwesimba rekutakura. Nekuwedzera kwekudiwa mumusika weNorth America, pamwe nekukwira kwemitengo yepasi rose yemafuta, inflation mumusika weNorth America ichawedzera.
Mari yekutumira ichiri kuwedzera
Kutevera kuchinjika kwemitengo yezvinhu zvakawandisa simbi simbi nesimbi, kuwedzera kwemitengo yekutakura iyi kutenderera kwavewo kukoshesa kutarira kwemapato ese. Sekureva kwemaindasitiri emukati, kune rumwe rutivi, mutengo wekutakura wakakwira, izvo zvakawedzera zvakanyanya mutengo wezvinhu zvinounzwa kunze kwenyika. Kune rimwe divi, kuwanda kwemitoro kwakawedzera nguva uye nekuwedzera mutengo mukuhwanda.
Saka, inguva yakareba sei pombi yekukwirana uye kukwira kwemitengo yekutakura ichagara?
Sangano rinotenda kuti marongero ekutakurwa kwemidziyo muna 2020 achange asina kuenzana, uye kuchave nematanho matatu umo marongedzero asina chinhu ekudzosa makontena, kuenzanisira kupinza nekutengesa kunze, nekushomeka kwemidziyo kuchawedzera, izvo zvichanyanyisa kudzikisa kupa kwakanaka. Kufambira mberi kupihwa uye kudiwa kwakasimba, uye nzvimbo yekutakura mwero ichakwira zvakanyanya. , Kuda kweEuropean neAmerica kunoenderera,uye yakakwira mitero yemitero inogona kuenderera kusvika kota yechitatu ya2021.
“Ikozvino mutengo wemusika wekutakura uri muchikwata chakasimba chekukwira renji. Zvinofungidzirwa kuti panopera gore ra2023, mutengo wese wemusika ungangopinda munzvimbo yekufonerwa. ” Tan Tian akataura kuti musika wekutakura unewo kutenderera, kazhinji kutenderera kwemakore matatu kusvika mashanu. Mativi ese ari maviri ekutakurwa kwekutakura uye kudiwa zvakanyanya kutenderera, uye iko kudzoreredza padivi rekudiwa kunowanzo fambisa iyo yekudyara yedanho rekupinda yekukura kutenderera mumakore maviri kana matatu makore.
Munguva pfupi yapfuura, S & P Global Platts Global Executive Edhita-mu-Chief weContainer Shipping Huang Baoying akadaro mubvunzurudzo neCCTV, “Zvinotarisirwa kuti mitero yekutakura zvinhu mumakontena icharamba ichikwira kusvika mukupera kwegore rino uye ichizodzoka mukota yekutanga yegore rinouya. Naizvozvo, mitero yemidziyo yemidziyo icharamba ichinonoka pamusoro pemakore. Kumusoro. ”
NYAYA IYI YAKADZIDZISWA KUCHINA CHINA KUPONESA VHIKI